Mirrors Nepal » बार्सिलोनाद्वारा नेइमार फर्काउन अस्वीकार !
बार्सिलोनाद्वारा नेइमार फर्काउन अस्वीकार !
२९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १८:५६
यसै सिजन अप्रत्यासित रूपमा बार्सिलोना छाडेर फ्रेन्च क्लब पिएसजी गएका ब्राजिलियन स्टार नेइमारले पुनः बार्सिलोनै फर्किन चाहेको विषय चर्चामा छ । तर, क्लब बार्सलोनाले भने नेइमारको सम्भावित फिर्तीबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
स्पेनिस ‘मार्सा’मा प्रकाशित समाचारअनुसार नेइमार बार्सिलोना फर्किन चाहेको चर्चा चुलिएसँगै बार्सिलोनाका प्रवक्ता जोसेप भाइब्सले अहिलेसम्म नेइमारको फिर्तीबारे बोर्डमा छलफल नभएको र आफूहरूकहाँ कुनै त्यस्तो प्रस्तावसमेत नआएको स्पष्ट पारेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा बार्सिलोनाका इभान राकिटिक र फिलिपे कोटिनहोले नेइमारलाई क्लबले फिर्ता गरे राम्रो हुने धारणा राखेपछि नेइमारको बार्सिलोना फिर्तीबारे सम्भावित चर्चा झनै बढेको छ । उनीहरू नेइमारलाई पुनः क्याम्प नोउमा फर्काउनुपर्नेमा देखिएका छन् ।
‘नेइमार बार्सिलोना फर्किनबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ बार्सिलोनाका प्रवक्ता भाइब्सले स्पष्ट पारे ।
उनले अगाडि थपे, ‘ब्राजिलियन स्टार जो हिजो यहाँ थिए, उनले बहिर्गमन रोजेपछि हामीले उनको सफल करिअरका लागि शुभकामना दिएका थियौं । तर, त्यसयता अहिले चर्चा चलेजस्तो केही पनि भएको छैन ।’
प्रवक्ताले मिडियामा आएका हल्लाकै भरमा आफूहरू नेइमारको अवस्थाप्रति गम्भीर नरहेको पनि बताए । ‘मलाई लाग्दैन, यो हामीले चासो दिने बेला हो ।’
सोमबार मात्रै नेइमारको क्लब पिएसजीका मालिक नसिर अल खिलाफीले खुट्टाको अप्रेसन गरेर ब्राजिलिमा आराम गरिरहेका नेइमारसँग भेटेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्मयका अनुसार खिलाफीले नेइमारको आगामी भविष्यबारे उनीसँग कुराकानी गरेका छन् । खिलाफी नेइमारलाई भेट्नकै लागि ब्राजिलि पुगेको बताइएको छ ।
नेइमार गत समरमा विश्वकीर्तिमानी मूल्य २ सय २२ मिलियन युरोमा पिएजी गएका थिए । तर, पछिल्लो समय टिमका खेलाडीका साथै प्रशिक्षकसँग सम्बन्ध उति राम्रो नभएको तथा उनको टिम च्याम्पियन्स लिगबाट रियल मड्रिडको हातबाट पराजय भोग्दै बाहिरिएपछि निराश नेइमारले पिएजी छाड्न चाहेको बताइएको छ ।